Semi-zvachose matattoo, aripo here kana kuti iwo chitsotsi? | Kunyora
Semi-zvachose matattoo, aripo here kana kuti iwo chitsotsi?
Kune vakawanda mukana we ma tatoo semi-zvachose chimwe chinhu chinoedza kwazvo. Iko mukana wekupfeka chidimbu chingaite se tattoo Chaizvoizvo, asi pasina kugara zvachose, zvakanaka kana tisina chokwadi nezve dhizaini, semuenzaniso.
Asi, Iyi sarudzo mhinduro chaiyo here kana kuti ingori chitsotsi chekukwezva vasina kungwarira? Tichazviona zvinotevera.
1 Zvavanovimbisa ...
2 ... uye chii chaizvo chinoitika
Semi-zvachose matattoo akavakirwa pane akateedzana ezvipikirwa. Izvo zvidimbu zvinovimbisa kupedza mwedzi mitanhatu, gore kana kana maviri kana mashanu. Tsananguro "yesainzi" yevanhu vanoita aya maTattoo ndeyekuti inki inogara mune yakanyanyisa pamusoro peganda (iro ganda rine matatu materu uye nyora dzinopinda mune yechipiri) uye kuti inosvinudzwa yega pamusoro nguva, dhizaini inodzima zvishoma nezvishoma kusvika pasisina zvisaririra.
Maitiro avanovimbisa akafanana chaizvo neaya ehupenyu hwese, ine tsono, ingi (mune dzimwe nguva yakasanganiswa) uye kurwadziwa.
... uye chii chaizvo chinoitika
Sezvaunogona kufungidzira, kana kuita kwacho kuchisanganisira zvakafanana netatoo chaiyo, pane chimwe chinhu chisingakodzere. Chokwadi ndechekuti hazvigoneke kuti inki igare mune yakanyanyisa pamusoro peganda uye muzviitiko zvakawanda inopinda kusvika yechipiri, nezve chii nenguva iwe unenge uine tattoo iyo yakadzimwa, hongu, asi kwete zvachose. Mumakore akati wandei, iyo semi-yekupedzisira tattoo ichave yashanduka kuita yekusingaperi blur iyo inogona kungobviswa chete neraser.
Muchidimbu, chii Kana zvasvika pakutora nyora tine sarudzo mbiri: dzechinguva (henna, zvitambi nezvimwe) uye zvechigarire zveupenyu. Hapana nzvimbo yepakati.
Isu tinovimba kuti musoro weti semi-zvachose maTatato akakufarira uye akajekesa kumwe kusahadzika. Tiudze zvaunofunga mune zvakataurwa!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Tattoos » Body Art » Semi-zvachose matattoo, aripo here kana kuti iwo chitsotsi?
French bulldog tattoo, imbwa inoyevedza
Materu ekuchamhembe nyora